N'ogbe Ecomomic laminate floor EIR Series Manufacturer and Supplier | Moyo
Nha: 1220X170mm,1220x200mm, 810X150mm
Ọkpụrụkpụ: 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Mgbe ụfọdụ a na -akpọ ala laminate osisi osisi laminate, n'agbanyeghị na ha bụ osisi naanị n'akụkụ abụọ. Nke mbụ, ntọala ala nke laminate nwere irighiri osisi ndị a pịrị apị. Nke abụọ, elu ya na-adị ka ezigbo osisi n'ihi ezigbo onyonyo onyonyo-nke bụ foto a tụgharịrị nke ọma nke ejiri osisi kpuchie ya.
A na -akwanye irighiri osisi jikọtara ọnụ iji mepụta mpempe akwụkwọ. Mpempe akwụkwọ ndị a nwere foto fotorealistic nke osisi ma ọ bụ okwute agbakwunyere n'elu, ma kpuchie ihe onyonyo a. Ihe mkpuchi ahụ, akwa na -adigide, dị gịrịgịrị, nke doro anya, bụ linchpin dị n'etiti akwa dị nro na ihe mpụga dịka mmiri mmiri, ụzarị UV, na ọkọ.
Eyi Layer:Ala a na -etecha edocha bụ mpempe akwụkwọ dị larịị abụọ melamine kpuchiri. Igwe oyi akwa a kachasị elu bụ ụdị mpempe akwụkwọ plastik siri ike nke nkịta, oche, ikiri ụkwụ dị elu, na ihe ndị ọzọ na-emebi emebi na-anaghị ahụkarị.
Igwe onyonyo: Ọbụlagodi mgbe a na-elele ala ala laminate dị nso nwere ike iyi ihe dị adị. Nke a bụ n'ihi onyonyo onyonyo nke ezigbo osisi dị n'okpuru akwa eyi.
Ntọala Ala (Isi):N'okpuru foto osisi, ihe dị ka ọkara inch nke ihe mejupụtara osisi. Ụdị ngwaahịa mgbawa osisi ọ bụla nwere ike ibute mmiri. A na -ahụta na ntọala ụlọ dị larịị siri ike, mana ọ bụ naanị ruo ụfọdụ. Ọ ga -eguzogide ụfọdụ mmiri, mana ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ewepụrụ mmiri a ngwa ngwa.
Laminate ọ dị mma maka gburugburu ebe obibi?
Azịza nye ajụjụ a na-adabere na nkọwapụta nke ala-enyi na enyi, mana ee-n'ozuzu, ee! Laminate bụ otu n'ime ala ndị na-ejikwa gburugburu ebe obibi dị mma.
Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na -eji ihe ndị sitere n'okike (fiberboard ma ọ bụ plywood) n'ime akwa oyi akwa ya, yana naanị obere ihe sịntetik na akwa ya. Nke a pụtara na enwere ike imegharị ya ọzọ.
Tụnyere vinyl, nke a na-eme ka laminate bụrụ nhọrọ enyi na enyi. Otu n'ime ọghọm kasịnụ nke ala vinyl plank flooring bụ na ejiri plastik mee ya kpamkpam. Nke a pụtara na, ewezuga ụfọdụ obere ụdị dị ka Proximity Mills, a naghị emegharị ya ọzọ.
Nke gara aga: Ụlọ ịsa ahụ guyana achara mpempe akwụkwọ pvc resine maka ogwe ụlọ
Osote: ala laminate maka agba parquet